शारीरिक सुखभो’गमापनि महिलाहरु किन रुन्छन् ? डा. भावना यस्तो भन्छिन् – Khabaarpati
December 13, 2020 December 13, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on शारीरिक सुखभो’गमापनि महिलाहरु किन रुन्छन् ? डा. भावना यस्तो भन्छिन्
काठमाडौं । शारीरिक सुखभो’ग दुई व्यक्तिको बीचको सम्बन्ध गाढा र प्रेम वृद्धि गर्न एक माध्यम हो । यसले सम्बन्धको घनिष्टता बढाउँछ र दुबै साझेदारहरूले खुशी र आनन्द पाउँछन् । तर धेरै महिलाहरु शारीरिक सुखभो’ग पछि खुशी महसुस गर्दैनन्, बरु चिन्तित हुन्छन् ।
धेरै महिलाहरु शारीरिक सुखभो’गपछि रुन थाल्छन् । यदि तपाईं आफैंले यो अवस्था महसुस गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो तपाईंसँग मात्र हुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एकदम सामान्य समस्या हो । विज्ञानमा, यो समस्यालाई पोष्ट कोइटल डिसफोरिया (पीसीडी) भनिन्छ ।
इन्टरनेसनल सोसाइटी फर से*क्शु*अ*ल मेडिसिनका अनुसार केही महिलाहरु शारीरिक सुखभो’गपछि धेरै भावनाहरू हुन्छन् जसले उनीहरूलाई शारीरिक सुखभो’गपछि रुन थाल्छन् । यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले शारीरिक सुखभो’गको समयमा रमाईलो गरेनन् । महिला खुशी र पूर्ण शारीरिक सुखभो’ग पछि पनि रुन सक्छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक डा. भावना बर्मी भन्छिन्, ‘कहिलेकाँही शारीरिक सुखभो’गको समयमा महिलाहरू यत्ति उत्साहित हुन्छन् कि उनीहरूको दिमागका सबै कोषहरू सँगै काम गर्न थाल्छन् । यसले उनीहरूलाई सबै प्रकारका भावनाहरू महसुस गराउँछ ।
रुनु वास्तवमा आराम गर्ने एउटा तरिका हो । हामी सबैको दिमाग रोएपछि शान्त हुन्छ । पीडा बाहेक पीसीडीका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ ।’ यी ५ कारणहरू छन् जसले तपाईंलाई वा तपाँईको पार्टनरलाई शारीरिक सुखभो’गपछि रुन वाध्य पार्छन ।
१, शारीरिक सुखभो’गपछि प्रेम अभिव्यक्तिको अभाव
के तपाईं र तपाईंको पार्टनर शारीरिक सुखभो’गपछि कुरा गर्नुहुन्छ ? के तपाईं दुबैजना प्रेम गर्नुहुन्छ ? हामी तपाईंलाई बताउँछौं तपाईंको भावनात्मक स्वास्थ्यको लागि यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
यसले त्यो व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण महसुस गराउँदछ जोसँग तपाँईंले शारीरिक सुखभो’ग राख्नुभयो । यो किन शारीरिक सुखभो’गपछि प्रेम वा संलग्नताको अभावले तपाईंलाई अनावश्यक महसुस गराउँछ । त्यसैले तपाईं भावनाहरूले भरिनुभयो जुन आँखाको मार्गबाट ​​बाहिर आउँदछ ।
२, अपमान वा घात
धेरै चोटि यो हुन्छ कि महिलाहरू आफ्नो शरीरको बारेमा विश्वास गर्दैनन्, र उनीहरू आफ्नो शरीरको लागि लाजमर्दो महसुस गर्छन् । यही कारणले उनीहरु शारीरिक सुखभो’गपछि रोएर बस्ने गर्छन । यस बाहेक कुनै पनि नराम्रो अनुभवले दिमागलाई सँधै असर गर्छ ।
धेरै चोटि शारीरिक सुखभो’गको अनुभवले उनीहरूलाई नराम्रो घातको सम्झना गराउँछ । यस्ता महिलाहरुमा रुने कुरा धेरै सामान्य पाइएको छ । शारीरिक सुखभो’गको बारेमा कसैको विचारहरू धेरै संकुचित वा निषेधित छन् भने पनि, उनीहरू पछि लाज महसुस गर्न सक्छन् र रुन थाल्छन् ।
३, अत्यधिक खुशी
डा. बर्मी भन्छिन्, ‘जब लामो समयपछि कुनै महिलाले आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक सुखभो’ग राख्छ, पूर्ण उर्जा बाहिर आउँदछ । यसले आँखा हर्षको आँसुले भरिन् सक्छ ।’ शारीरिक सुखभो’गको समयमा अत्यधिक आन्नद मिल्दा पनि महिलाहरु रुने गर्छन । यसलाई पनि सामँन्य रुपमा नै लिने गरिएको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
हार्मोनल असन्तुलनका कारण महिलामा प्रसुतिपूर्व डिप्रेसन धेरै सामान्य लाग्छ । यदि शारीरिक सुखभो’गको प्रसवोत्तर समयमा हुन्छ, महिला भावनाहरु को कारण रोइरहेका हुन्छन् । उनी भन्छिन्, ‘पीसीडीको दर प्रसव–उदासीन महिलामा बढी छ । यदि यो बारम्बार भइरहेको छ भने विज्ञहरूको परामर्श लिनुहोस् ।’
५, प्रदर्शन चिन्ता
सामान्यतयाः पुरुषमा जस्तै, महिलालाई पनि एक समस्या आम हुन्छ । त्यो के हो भने शारीरिक सुखभो’गको समयमा कस्तो प्रदर्शन गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । यदि उनीहरुको सोचनुसार केही भएन भने तिनीहरू तनावग्रस्त हुन्छन् । तनावको सीधा प्रभावले उनीहरु रोइरहेका हुन्छन् ।
उनी थप्छिन्, ‘के तपाईका पार्टनरहरू तपाईसँग सन्तुष्ट छन् ? यो प्रश्न सबैको दिमागमा हुन्छ । जब यो दबाब धेरै उच्च हुन्छ, नतिजा रुनु नै हुन्छ ।’ त्यहाँ धेरै अध्ययनहरू छन् जसले ३२ देखि ४६ प्रतिशत महिलाहरूले पीसीडी अनुभव गर्दछन् ।
सामान्यतया यो धेरै सामान्य हुन्छ । त्यसकारण यस्तो कुरामा चिन्ता लिइरहनु आवश्यक हुँदैन । त्यसकारण तपाईं एक्लो हुनुहुन्न, आफैलाई कमजोर नबनाउनुहोस् । तपाईंको पार्टनरसँग कुरा गर्नुहोस् र आवश्यक परेमा विशेषज्ञहरूको सल्लाह लिनुहोस् ।